Etihad Airways inoratidza UN World Refugee Day nekubatsira vapoteri veSyria muJordani
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Etihad Airways inoratidza UN World Refugee Day nekubatsira vapoteri veSyria muJordani
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kodzero Dzevanhu • Jorodhani Kuputsa Nhau • Siria Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Etihad Airways, iyo National Airline yeUnited Arab Emirates, yakacherekedza UN World Refugee Day nekufumura zvirongwa zvedzidzo uye kupa zvipo zvekukurumidza kune vapoteri veSyria muMrajeeb Al Fhood Camp muJoridhani.
Zuva reVapoteri reNyika rakaratidzirwa musi wa20 Chikumi gore rega rega kuti vatarise pamamirioni evapoteri nevanhu vakapoterwa mukati menyika pasi rose, avo vakamanikidzwa kutiza misha yavo nekuda kwehondo, kupokana uye kutambudzwa.
Sechikamu chekuzvipira kwayo kutsigira zvinangwa zvevanhu, iyo ndege yakavhura iyo Etihad Airways Kudzidza uye Kubudirira Center kupa vana vapoteri neIT uye nehunyanzvi hwemakomputa, kuvabatsira kuvagadzirira ramangwana.
Etihad yakaparadzirawo mabhuku, mabhegi uye zvinyorwa kune vana mazana maviri nemazana mana mumusasa, sechimwe chirongwa chiri kuenderera mberi chekubatsira kutsigira dzidzo pakati pemapoka anotambura.
Nendege yakaparura zvakare Etihad Tolerance Bakery chirongwa cheUAE 'Gore Rekushivirira', kukudziridza hunyanzvi hwekubika pakati pevakadzi vapoteri mumusasa weJoridhani, uye kuvabatsira kuti vawane mari kubva kubhekari yekutengesa.
Etihad pabhobho chef vakaita musangano wekubheka uye vakaita zvinetswa zvekubika zvevakadzi, vachipa mibairo nemidziyo yekubika kune vanokunda uye vatori vechikamu.
Pamusoro pezvo, Etihad akabatanawo neEmirates Red Crescent uye Ministry of Foreign Affairs pamwe neInternational Cooperation kuti vape zvinhu zvekuyamura zvinosanganisira zvipfeko, magumbeze, zvigadzirwa zvekushandisa uye chikafu chakaomeswa kumhuri dziri mumusasa.
Ndege iyi yakaparadzirawo mabheji emubhedha chiuru kuchipatara chemusasa, icho chinopa kurapwa kune vapoteri.
Nhengo dzeEtihad manejimendi manejimendi, Etihad Youth Council, uye vanozvipira vamiriri kubva kuEmirates Red Crescent uye Ministry of Foreign Affairs uye International Cooperation, zvakare vakaita nevana nevana vemusasa mumitambo yakawanda yevaraidzo.
Khaled Al Mehairbi, Honorary Chairman weCorporate Social Responsibility Programme, Etihad Aviation Group, akati: "Takazvipira kubatsira vana ava kuenderera mberi nerwendo rwekudzidza, kubatsira kuchengetedza ramangwana rakanaka uye kunyatsobatana munharaunda."
“Dzidzo ndiro dombo repakona rekusimudzira chero nharaunda, uye nekutsigira mikana yavo yedzidzo, tinokwanisa kuisa mari mune ramangwana revana ava tobatsira kuvadzivirira kubva mukubatwa nomweya wekubiridzirwa kana kutya. Ndinoda kutenda vatinoshanda navo uye vanozvipira vashandi avo vakabatana nesu kutora chikamu mune izvi zviitiko uye kuendesa zvekushandisa. Kushanda nesimba kwavo uye nguva yavo vave vachishandisa zvakanaka mukushandira chinangwa ichi chakanaka. ”
Pakutanga, Etihad Airways yakapa zvekudzidzisa uye yakabatsira kugadzirisa zvikoro munyika dzinosanganisira India, Kenya, Serbia, Philippines, Bosnia, Uganda, Bangladesh, neSri Lanka.